Turkey si ọhụrụ News | RayHaber | raillynews
HomeAkwụkwọ Ozi Okwu MmaliteTurkey si ọhụrụ ozi ọma
Turkey si ọhụrụ ozi ọma
10 / 05 / 2020 Akwụkwọ Ozi Okwu Mmalite
A na-akpọsa ihe omume ọ bụla n'ezie ma ọ bụ ihe ụtọ dị ka eziokwu si dị oziA na-eme ya na nyocha anaghị ele mmadụ anya n'ihu. Asụsụ ejiri were doo anya ma dozie ya n'ụzọ ga-eme ka ndị mmadụ ghọta.
Ozi mgbe ịntanetị abanyebeghị na ndụ anyị; Edere akwụkwọ akụkọ na redio. Na mmepe nke teknụzụ, n’elu ịntanetị haberxnumx Saịtị dị mma na ọkachamara dịka akụkọ, na-ebipụta ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ ma na-eme ugbu a n'ụwa niile na mba anyị ma na-ebipụta ha na weebụsaịtị ha.
Iji mara ngwa ngwa banyere ụdị isiokwu dị na nkeji ikpeazụ, isi okwu, ụwa, akụnụba, egwuregwu, akwụkwọ akụkọ na teknụzụ ahụike. https://www.haber365.com.tr/ Can nwere ike iso njikọ ahụ.
Turkey coronavirus Ndepụta Ị
Coronavirus bụ otu ihe dị mkpa metụtara ọ bụghị naanị obodo anyị kamakwa ụwa dum. Haber365, nke nyochara nje a, nke na-emetụta ụwa na mba anyị, site na mmalite ma ghara ịtọhapụ ya na atụmatụ ya, na-akọ akụkọ banyere mmepe nke coronavirus na mba anyị na ụwa. Ebe ntanetị, nke gụnyere akụkọ kachasị ọhụrụ site na usoro ndị a na-eme megide coronavirus na mba anyị, na ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa, na-ebipụtakwa ozi na-ezighi ezi na weebụsaịtị ya, site na ọrụ ndị dọkịta anyị.
Na ozi na-esote ọnụ ọgụgụ nke ọnwụ coronavirus n'ụwa nile, ọ na-ekwuputa ihe mba dị iche iche na-eme megide nje ahụ na akụkọ ha. Na akụkọ, ebe ị ga-ahụ mba ndị nwere akwụkwọ nyocha kachasị na ndabere nke mba, a na-etinyekwa akụkọ banyere ndị nwere coronavirus n'ụwa nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na egwuregwu. N'etiti akụkọ na ọ na-agbaso usoro ụwa banyere coronavirus; Ọ na-akọkwara ndị mmadụ na obodo anyị banyere ozi banyere ihe mba ndị ọzọ na-eme maka coronavirus, otu ha si elezi anya, etu ndị mmadụ si ebi n’obodo ha.
Na ozi na saịtị na i nwere ohere inye ka a coronavirus, dị ka aka mba nke ụwa Turkey, nke nwekwara na-ekere òkè na ozi ọma Haber365, burukwa na ebumnobi na ezi uche ọma, aku na uba, egwuregwu na tabloid ozi ọma na ndị kasị ebumnobi ụzọ na-enye ebe a na-na ozi ọma ọdịnaya ị ga-eso.
On Country Agenda Rada
Ewezuga ozi banyere coronavirus, ebumnuche nke obodo ahụ nwere akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba, na akụkọ egwuregwu. Ebe a na-akọ akụkọ, nke na-esokwa mmepe nke obodo anyị n'ihe gbasara ahụike na teknụzụ dị iche iche, ọkachasị nkeji ikpeazụ. ozi na-agwa ndị na-eso ụzọ ya banyere ihe omume ahụ. Ebe akụkọ ahụ, nke na-enye ọkwa kachasị elu nke akụkọ ọ na-enye ya na ihe nkiri vidiyo ya na foto ya, na-ewetara akụkọ kachasị ọhụrụ na akụkọ na-atọ ụtọ site na iji anya na-eleghị anya n'ihu.
Ọ bụ ezie na coronavirus nọ n'elu ebumnuche mba ugbu a, ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-arụ ọrụ anyị. Ebe a na-akọ akụkọ, ebe asọmpi n'etiti ndị na-eso ya na-agbakọ kwa ụbọchị, gụnyekwara akụkọ nwere ike ịlọta n'oge Eid al-Fitr.
N'otu oge ahụ, a na-anụ akụkọ banyere mgbe a ga-emeghe ntutu na ntutu isi ndị kwesịrị imechi ebe ọrụ ha n'ihi coronavirus karịsịa ndị nwe ebe ọrụ.
Ebe a na-akọ akụkọ ya gụnyere akụkọ egwuregwu sitere na ụwa na obodo anyị. Ebe a na-akọ akụkọ, nke na-egosi ọrụ nlezianya na ihe otu egwuregwu ụwa na ndị otu obodo anyị na-eme, ihe nnyefe dị na usoro a, ihe ndị njikwa, ndị ọka ikpe, ndị nkuzi na ndị na-eme egwuregwu na-eme, bụ ihe ọmụma banyere otu esi emefu ọnwa Ramadan n’ọrụ ahụike. Akụkọ ya na-adọrọ uche ya.
Ndị na-anụ ọkụ n'obi na teknụzụ nwere ike ịgbaso mmepe na ụwa na mba anyị na saịtị akụkọ. Ndị mmadụ na-egosiwanye mmasị n'egwuregwu ịntanetị n'oge a n'ụlọ nwere ike ịnweta ozi gbasara egwuregwu nke Oku ọrụ, nke na-emetụta ụwa niile, ebe ha na-egosi na ha sochiri ihe ọhụrụ ndị kachasị ọhụrụ na smartphones nke ghọrọ akụkụ nke ndụ na akụkọ teknụzụ.
Haber365, nke pụtara akụkọ ya nke na-ebute ụwa na ala dum, enyela saịtị akụkọ ya; na-aga n’ihu ọrụ ọkachamara na nke ozi dị elu na akụkọ banyere ọnọdụ okporo ụzọ, ọnọdụ ihu igwe na ọnụego mgbanwe.
Ray na-agwa Ray ihe a. rayhaber.com dị n'ịntanetị ...
Ozi Teleferik na Bursa
Ọrụ ụlọ ụlọ Metrobus na-amụba na Avcilar na Beylikduzu
Ozi ụgbọ ala na tram na Bursa
Akụkọ okporo ụzọ | Ray News | Ray dị egwu | okporo ígwè Turkey
Kardemir na-akọrọ ozi ọma na ndị okporo ụzọ ga-emeghere onwe ha
TCDD: Akụkọ Mgbasa Ozi TCDD
Akụkọ nke Ọrụ Ndị Ukwuu Anaghị ada site na Agenda
Ozi kwuwapụtara mkpọmkpọ ebe akụkọ Tarihi achọtara na Haydarpaşa Station News Fact…
Turkey si lọjistik akụrụngwa bụ ezughi oke
Trabzon Uzungöl Turkey ga-fọdụrụ n'ezinụlọ cable ụgbọ ala
Turkey ọhụrụ skai ntụrụndụ
Turkey si Best Ski Resorts (Photo Gallery)
Erdogan nyochara ụlọ ọgwụ n’okpuru ụgbọ elu Ataturk
Ekwela ka ọrịa a bute ya!
Çetin Dam, Europe Mmepe Ike Mbido Europe
Turkey nzọpụta jikọtara iga
Mountains nke Turkey aku na uba ga-enwetara
2023 zaa ke Turkey na iga
Njem njem na ọdụ ụgbọ njem na Istanbul na-egbochi ụbọchị oriri ụbọchị 4